चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ, के तपाई पनि बढी चिन्ता लिनु हुन्छ ? चिन्ताले निम्ताउने समस्या, यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
चिन्ता र तनाव लिइरहने व्यक्तिको हड्डीमा खनिजकोे मात्रा घट्न जान्छ । निरन्तर चिन्ता लिने व्यक्ति जीउ दुख्ने समस्याबाट आक्रान्त हुँदै जान्छ । उखानै छ नि चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ ।
यद्यपि, चिन्ता आफैँमा रोग होइन । तर, यसले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक मानिन्छ ।
चिन्ताले निम्ताउने समस्या, यस्ता छन्
१.रोगप्रतिरोधी क्षमता घटाउँछ
चिन्ता लिइरहने व्यक्तिको शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता घट्न जान्छ, जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता रोग लागिरहन्छन् ।
२.जिनमा असर गर्छ
चिन्ता लिनाले मानिसको जिनमै बदलाव आउँछ । शरीरमा कति बोसो लाग्ने, रोगप्रतिरोधी क्षमता कस्तो हुने, बुढ्यौली कहिले सुरु हुने, क्यान्सर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा जिनले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने गर्छ । चिन्ता लिने व्यक्तिको जिन यी स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने किसिमले ‘मोडिफाइड’ हुँदै जान्छ ।
३.दिमागमा असर गर्छ
चिन्ताले दिमागमा रहने हिप्पोक्यामस भन्ने भाग ‘ड्यामेज’ गरिदिन्छ । परिणामतः व्यक्तिको स्मरणशक्ति घट्छ ।
४.शरीरमा विकार बढाउँछ
चिन्ता लिँदा बोसो र चिनीयुक्त खानाप्रति आसक्ति बढ्न जान्छ, जसले शरीरमा विकार निरन्तर सञ्चय गर्दै लान्छ र शरीर विभिन्न रोगको घर बन्न पुग्छ ।
चिन्ता र तनाव लिइरहने व्यक्तिको हड्डीमा खनिजको मात्रा घट्न जान्छ । निरन्तर चिन्ता लिने व्यक्ति जीउ दुख्ने समस्याबाट आक्रान्त हुँदै जान्छ ।
चिन्ता र तनाव कम गर्न सकिएन भने यसले डिप्रेसन र साथै अन्य कडा खालका मानसिक रोग निम्त्याउँछ ।
चिन्ता र तनाव लिने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोग लाग्ने जोखिम बढी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
तनाव र चिन्ताका कारण शरीरभित्र उत्पन्न हुने रसायनले यौन उत्तेजना जगाउने रसायनलाई निस्तेज गरिदिन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति यौनप्रति कम इच्छुक हुँदै जान्छ । चिन्ता लिने व्यक्तिको शरीरमा सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनको मात्रा कम हुन्छ ।
चिन्ता लिँदा शरीरमा कोर्टिसोल नाम गरेको हार्मोन उत्सर्जन हुन्छ, जसले कपालका जरालाई कमजोर गरिदिन्छ र कपाल झर्न थाल्छ ।
चिन्ता बढी लिने व्यक्तिमा दाँत खिइने, गिजामा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
११.मुटु कमजोर बनाउँछ
चिन्ता लिँदा मुटुका मांसपेशी कमजोर हुन्छन् । स्टेस हार्मोनले मुटुको धड्कन बढाउने र नसा संकुचित गरेर रक्तसञ्चारमा बाधा उत्पन्न गराउँछ । यस्ता व्यक्तिलाई हृदयाघात हुने जोखिम बढी हुन्छ ।
सधै चिन्तामा रहने व्यक्तिको शरीरमा नयाँ कोषिकाको विकास ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति चाँडै बूढो देखिन्छ । छालामा चाउरी पर्ने, मांसपेशी कमजोर हुने, आँखा कमजोर हुनेजस्ता बुढ्यौलीका संकेत चाँडै देखा पर्छन् ।
Topics #चिन्ता #चिन्ताले निम्ताउने समस्या #चिन्ताले निम्त्याउने
Don't Miss it दम के हो ? किन हुन्छ ? लक्षण र यसको घरेलु उपचार विधी जान्नुहोस्
Up Next किन हुन्छ युरिक एसिड ?? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपायहरु जान्नुहोस्
के खाने, के नखाने हवाईयात्रामा ?
हवाई यात्राका क्रममा कतिपयलाई पेटसम्वन्धि समस्या हुनेगर्छ । यसको कारण हो, यात्रापूर्वको खानपान । उचाईंमा रहँदा पेट र पाचनतन्त्र ३०…
हिन्दू धर्मशास्त्र अनसार ननुहाइकन खाना खानु हुँदैन भन्ने मात्र होइन यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ
हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्नान नगरिकन भोजन गर्नु हुँदैन भनिएको छ । शास्त्रमा लेखिएको छ : अस्नायी समलं भुंक्ते अर्थात् ननुहाई भोजन…
यस्ता छन काँचो केराका फाइदाहरु
१. मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ – मधुमेहका रोगीले काँचो केरा खान सुरु गर्नुहोस् । यो रोग नियन्त्रण गर्ने अचुक औषधि हो…
अहिले धेरैलाई सताउने पाइल्स, फिस्टुला र फिसर के हो ? यसका लक्षण र उपचार
आजको युगमा पनि लाज तथा सर्ंर्कीणताका कारणले कतिपय विरामीहरूले पायल्स, फिस्टुला जस्ता रोगहरूलाई लुकाएर बसिरहेका छन् । करिब ६०-७०% नेपालीहरूलाई…
दम के हो ? किन हुन्छ ? लक्षण र यसको घरेलु उपचार विधी जान्नुहोस्
दम (Asthama ) रोगभन्दा पनि रोगहरूको लक्षण हो । यो रोगमा श्वासनली वा वरिपरिको जोडिएको खण्ड सुन्निन्छ। यस कारणले फोक्सोमा…